Yini eyasidonsela ekuhwebeni kwe-FX, kungani senza lokho, 'kusebenza' kanjani kithi, siye sahlangabezana nemigomo yethu? | | Ibhulogi ye-FXCC
Yini eyasidonsela ekuhwebeni kwe-FX, kungani senza lokho, 'kusebenza' kanjani kithi, siye sahlangabezana nemigomo yethu?
Apr 30 • Phakathi kwemigqa • Ukubuka kwe-8856 • 1 Comment Kulokho okwakudonsela ekuhwebeni kwe-FX, kungani senza lokho, 'kusebenza' kanjani kithi, siye sahlangabezana nemigomo yethu?
Ngezinye izikhathi kubalulekile ukuthatha isinyathelo emuva ukuze uthathe 'umbono wezindiza' lapho sikhona khona manje ngokuphathelene nezinhloso zomuntu siqu esizibekwe ekuqaleni lapho siqala ukungena kulo mboni.
Isizathu sokuthi kufanelekile ukuthatha isifinyezo sendawo esikuyo ukubona ukuthi izinhloso nezinhloso esizibeka ekuqaleni kwendlela yethu yokuhweba zihlangene, noma zisondele. Futhi uma kungenjalo kungani kungenjalo nokuthi ngabe ezinye 'fixes' ziyadingeka ukuze usibuyisele emigwaqweni.
Eminye yemigomo nemigomo esinayo lapho sithatha izinyathelo zethu zokuqala ezinganeni kulo mboni zazicacile. Isibonelo, kungenzeka ukuthi sasifuna ukuzimela kwethu futhi ngokulula (futhi mhlawumbe ngokweqile) befuna "ukwenza imali eningi". Ukuzimela kungatholakala kalula, kodwa, ukwenza imali, kusukela emakethe esiqale siyibuke njengesihluku esisodwa esihlomile, siyisiphakamiso esinzima kakhulu.
Ezinye izinhloso esingase sizibekele kuzobe ziyizengqondo kakhulu; kungenzeka ukuthi sasifuna ukuguqulwa komsebenzi ngokugcwele uma siqaphela ukuthi ngaphezu kwakho konke okunye imboni yezokuhweba ye-FX kanye nokubanzi ingaba ikhaya elihle lokudala okuningi phakathi kwethu.
Ngakho-ke ake sibheke izici eziningi ezasikhanga ekuqaleni embonini futhi mhlawumbe singenza ingqondo engqondweni yethu lapho sisezingeni lethu lokuthuthukiswa komuntu siqu. Isibonelo, uma ukuzimela kungenye yezimiso zethu kuhloswe kanjani ukuthi siyifaka kanjani, isibonelo, isikali esiphakathi kwe-1-10?
Sithengisa ukuze senze imali, ekugcineni sizisebenzise futhi sizimele ezikhungweni zokuqashwa. Sithemba ukwakha imali engenayo, sijabulele ezinye zezinto zokunethezeka empilweni kanye nokwakha impilo ehlala njalo futhi eqhubekayo evela embonini esiyithandayo njengengxenye. Sisazohweba ngoba mhlawumbe, esikhathini esifushane kuya esikhathini esiphakathi, sesifinyelele imigomo yethu. Sithokozela inselelo yethu esanda kuyithola futhi siyithola inzuzo ngokwezimali, ngokwengqondo nangokomzwelo. Umbuzo wethu olandelayo - ingabe sihloselwe ukushaya izifiso ezide esizibekelele?
Yini esithemba ukuyithola?
Sithembele ukuthola ukuzimela kwethu, sithembele ukuthola imali, sithembele ukuthola indlela yokuphila engaphelele ukuthi ngabe asikwazi ukuzuza uma ngabe sihlale emsebenzini wethu ongu-9 kuya ku-5. Sithembele ukuthola imboni entsha eshukumisayo neyinselele futhi ekugcineni sibhekwe njengabachwepheshe emkhakheni wethu. Futhi ngenxa yalokho kuthuthukisa ukuzihlonipha ngokwengeziwe, ukuzethemba kanye nenhlonipho phakathi kontanga yethu eqenjini lethu. Sike sifeza izindinganiso esizozibeka thina kanye nokuma emphakathini wethu wokuhweba esasiyethemba?
Yini eyasahlukanisa nabanye abahwebi abaqinisekisile ukufaneleka kwethu kokuhweba?
Sasibe / sinengqondo eyodwa, sizimisele, sinalo (futhi sisenayo) amandla okugcizelela kwengqondo nomzimba ukuqhubeka nokubhekana nezinkinga eziningi imboni engayifaka endleleni yethu. Asisilo uhlobo lomuntu ozokhipha into ethile ekuboniseni kokuqala kokumelana. Siyakwazi ukuzivumelanisa nezimo, sinengqondo, futhi sinengqondo. Sithuthukise amakhono ahlukene okubhekana nawo ukuze sikwazi ukubhekana nazo zonke iziphakamiso kanye nokuhlaselwa kanye nalezi zimboni zingasiphonsa. Naphezu kokukhuphuka nokuhlaselwa futhi kubanjwa imboni isithinte; ingabe sinesimo sengqondo esifanele kanye nendlela yokucabanga ekuhwebeni kwethu?
Yayiyini / ubuthakathaka bethu?
Abadayisi abaningi banenkinga yokusebenzisa ukungena kwezingeniso ezenzweni zabo, ngokuvamile inkinga elula ye-ego yethu ihamba endleleni. Nakuba siqaphela amandla ethu njalo sihluleka ukuqaphela ubuthakathaka bethu obudinga ukuhlonishwa okukhulu nokusebenza njengamandla ethu. Ngabe sisalokhu sithukuthele, sigijimela ekuhwebeni; ingabe siyahluleka ukunamathela ohlelweni lwethu lokuhweba? Ingabe sinenkinga yokunciphisa abawinile futhi sibambelele ekulahlekeni? Ngamafuphi, siye sazuza ukulawulwa kwezakhi ezonakalisayo ezingase zilimaze ikusasa lethu lokuhweba?
Singakanani isikhathi esizinikele ekuhwebeni futhi bekufanele yini?
Izinyanga zihamba ngokuhweba njengoba zenza iminyaka, sidinga uhlobo oluthile lwamamitha ukuze sihlolisise ukuthi isikhathi sethu sizuzisa kangakanani. Kuvele nje isikhathi esisebenzise futhi amandla esiwafakile ekufundeni amakhono ethu amasha ayawudinga? Ingabe siyaphumelela njalo futhi inenzuzo futhi uma kungenjalo singakwazi ukubona ngeso lengqondo iphuzu kusasa elikude kakhulu lapho singaba khona? Kukhona iphuzu elincane ekuzinikeleni isikhathi sethu ngokungahambisani nanoma yimiphi imivuzo, kodwa izindaba ezinhle ukuthi akukaze ziphuze kakhulu ukugxila futhi zibeke imigomo emifushane, ephakathi nesikhathi eside ekuhwebeni kwethu. Ngaphandle kokuthi sibeke ezinye izenzakalo ezibalulekile sizobe sincane kakhulu ukwahlulela amazinga ethu okusebenza jikelele.
Ingabe isitayela sethu sokuhweba sashintsha phezu kwezinyanga noma iminyaka?
Ingabe saqala njengabahwebi basuku futhi sithuthela ukuhweba / ukudoba ukudoba? Sithole umthengisi we-ECN / STP onokusabalalisa okuphansi namakhomishini asinike amandla okusebenza ngokuzikhandla kwe-scalp ekusebenzeni isikhathi esingaphansi kwamafomu? Umbono wethu wendawo lapho sikholelwa khona ukuthi singathatha imali emakethe yashintsha ngokuhamba kwesikhathi? Ukunqoba izithiyo nokuzivumelanisa nezimo yizici ezimbili zezimboni eziningi abahwebi abaphumelelayo abazozikhomba. Ikhono lokushintsha into engasebenzi ngendlela efanayo. Singathola ukuthi isitayela sethu lokuhweba nokuzikhethela kuyavumelana nezimo zethu zesikhathi, singathola ukuthi izinqumo zivumelane nezikhwepha zethu nobubuthakathaka bethu.
Njengoba kungabonakala ngokucacile yimibono eshiwo ngenhla eziningi zezinhloso esinazo kanye nemibono eminingi esiyibambe ngaphambili, sishintsha njengoba siba nolwazi oluningi njengabahwebi. Ukuthatha umbono omusha wendawo esiphila kuyo kungabonisa ukuthi kuyisivivinyo esiwusizo kakhulu. Kufana nokukhipha umzimba ngokugcwele njengabantu ngabanye ukuze ukwazi ukukala amazinga ethu jikelele wezempilo wezohwebo. Ukuskena kwethu kuphela kungokwengqondo kunokwenyama.
« Izintengo zasendlini e-USA zisakhula nakuba zihamba kancane njengoba inkomba yokuthembela kwabathengi iwela kancane Idatha yokuthengisa yaseJalimane iwa yi-1.9 ngonyaka unyaka, ukungasebenzi kweJalimane kunemali engalindelekile, kuyilapho ukusetshenziswa kweFrance kuphakama kancane »